Lviv National University Medical - Halalino Fanafody in Ukraine
Lviv National University Medical
Lviv National University Medical Details
Firenena : Ukraine
fanafohezan-teny : LNMU
Créé : 1784
mpianatra (eo ho eo.) : 5100
Aza adino ny hadihadio Lviv National University Medical
Ampiharo ny Lviv National University Medical
Okrainiana fieken-keloka Center
Danylo Halytsky Lviv National University Medical (LNMU) dia iray amin'ireo tranainy sy lehibe indrindra ny fanabeazana ara-pitsaboana andrim-panjakana ao amin'ny Ukraine. Izany no iray amin'ireo mpitarika ara-pitsaboana anjerimanontolo ny IV haavon'ny fankatoavana. LNMU manomboka avy amin'ny Medical Faculty of Lviv University, izay nisokatra tamin'ny Novambra 16, 1784, araka ny tombontsoa ny Aotrisy mpanjaka Josef II. In 2009 University Nankalaza ny 225 tsingerintaona.
22 ara-tsiansa sekoly miasa mavitrika sy hivelatra amin'ny Lviv National University Medical: momba ny fiterahana sy ny aretim-behivavy, zavatra simika, madio, ny areti-mifindra, ny tantara ny fitsaboana sy ny levitra, microbiological, morphological, ny neurology sy ny hoza-pitatitra, ny Oncology, ny otorhynolaryngology, ophthalmological, ny pathological Anatomy sy pathological physiology, pediatric, aretin-tsaina, ny Dentistry, ny anatiny aretina, pharmacological, batana, ny phtisiatry, ny simia sy ny levitra, ny fandidiana.
LNMU manome fieken-keloka ho an'ny olom-pirenena vahiny ho amin'ny undergraduate fanabeazana amin'ny Faculty ny General Medicine, Faculty ny Dentistry sy Faculty ny Pharmacy, fieken-keloka ihany koa ny manome ho an'ny fiomanana Course sy nahazo diplaoma teny Training. Araka ny License ny Ministeran'ny Fanabeazana, Science, Tanora sy ny Fanatanjahan-tena ny Ukraine АГ №582786 avy 07.02.2012 ny habetsahan'ny olom-pirenena vahiny ho Undergraduate Fampianarana - 250 olona, for fiomanana Course - 100 olona, fa, nahazo diplaoma teny fampiofanana - 150 olona.
amin'ny 78 Lviv National University Medical departemanta, tao amin'ny Sekoly Momba ny Clinical aretina, ao amin'ny Central Research Laboratory (CRL) ary Laboratory ny orinasa toxicology miasa 1211 mpahay siansa: 134 Dokotera ny Siansa sy ny mihoatra noho 620 PhD diplaoma mpihazona, ao anatin'izany ny 113 feno profesora, 369 mpiara mpampianatra, 50 zokiolona mpampianatra, 662 lefitra mpampianatra, 17 mpikaroka. Anisan'izany misy 23 Members, 7 Mifanaraka mpikambana ao amin'ny Akademia Momba ny Siansa, 12 Voninahitra Mpiasa Siansa sy ny Teknolojia,
7 Voninahitra mpiasa Fanabeazana, 19 voninahitra Doctors, 1 Voninahitra Mpiasa-batana Kolontsaina sy Sport,
8 Laureates-panjakana loka, dia ny Ukraine in Siansa sy Teknolojia.
Fanofanana ny manam-pahaizana manokana ao Lviv National University Medical dia omena amin'ny 6 fahaizanareo: Medical Faculty #1 ary #2, Faculty ny Dentistry, Faculty ny Pharmacy (tsy tapaka sy ny taratasy fanabeazana), Faculty ny fampiofanana, nahazo diplaoma teny, Faculty ny Foreign Mpianatra - araka ny fanabeazana-qualificational ambaratonga: manam-pahaizana manokana, tompony, ary koa ao amin'ny University Medical College araka ny fanabeazana-qualificational ambaratonga - zandriny manokana.
Ny isan-taona ny mpianatra oniversite vola mihoatra noho 19100 olona, izay ahitana 5426 undergraduate mpianatra (anisan'izany mihoatra noho 1000 vahiny mpianatra), 62 mpianatra ny fiomanana Course, mihoatra ny 1500 internship mpitsabo, 50 mpianatra ny Tompo ny fandaharana, 70 mpianatra ny PhD fandaharana, 70 , nahazo diplaoma teny mpitsabo (Clinichna ny Head), manodidina 11000 mpianatra ny Faculty ny fampiofanana, nahazo diplaoma teny, 312 mpianatra ny Medical College. Mpianatra rehetra fianarana misaina araka ny bola-Module rafitra.
In 2011 ny voalohany diplaoma ny mpianatra, izay nianatra araka ny fitakian'ny “Bologna” dingana, nitranga.
Nanomboka avy 1961 University manome fanabeazana ho an'ny olom-pirenena vahiny. Nandritra 50 taona tamin'ny 2,5 arivo dokotera sy pharmacists – hafa firenena no nahazo ny fanabeazana eto ary efa miasa soa aman-tsara toy ny dokotera sy ny pharmacists any amin'ny firenena maro eto amin'izao tontolo izao. Education dia omena ao Okrainiana, Rosiana Language, ary satria 1997 ny fampianarana ny mpianatra vahiny amin'ny teny Anglisy dia namoaka ary haingana dia haingana fampandrosoana. ankehitriny 70% ny University mpianatra vahiny mianatra amin'ny teny anglisy Medium Program.
University famakiam-boky misy mihoatra noho 530000 boky ny boky, boky fampianarana ary ny boky sy gazety ara-pitsaboana mifandraika hafa. Library manana solosaina ankehitriny fitaovana. Izy dia manana fifandraisana Internet ary mifandray amin'ny hafa tanàna siantifika trano famakiam-boky.
University ao amin'ny mpikambana ao amin'ny Fikambanana iraisam-pirenena sy ny Eoropeanina ny Anjerimanontolo, ary koa ny mpikambana ao amin'ny saika 70 fikambanana iraisam-pirenena hafa, akademia, vondrom. University dia tafiditra ho Directory ny OMS (WHO) sy ho eo an Directory ny Oniversite ny Eoropa Afovoany firenena. Eo amin'ny asa University LNMU manana ny toerana ambony ao naoty mitondra ny fanabeazana ambony andrim-panjakana sy ny toeram-pianarana ambony ara-pitsaboana amin'ny Ukraine (Scopus 2010 - Ny 2 toerana eo mpitsabo anjerimanontolo sy ny akademia Okraina).
Pitsaboana sampan-draharaha ny Oniversite manana ny famatsiam-bola mihoatra ny 10000 fandriana (41 fampidirana hopitaly), 9 polyclinic departemanta miaraka amin'ny 3510 mpanatrika nandritra ny fanovana, University foibe fitsaboana nify mahery 2000 mpanatrika nandritra ny fanovana.
Fidirana dingana in Lviv National University Medical
Koa satria 2016 Fidirana dingana amin'ny anjerimanontolo Okrainiana ho an'ny mpianatra vahiny aviable alalan'ny Okrainiana fieken-keloka Center.
Fa mihatra amin'ny Lviv National University Medical mpianatra vahiny tsy maintsy mampihatra-tserasera Okrainiana fieken-keloka amin'ny alalan'ny Center.
Rehefa avy nanamarina tsipiriany rehetra amin'ny fieken-keloka Center, dia handefa taratasy fanasana ny mpianatra.
Miaraka amin'ny taratasy fanasana ireo mpianatra dia afaka mandeha any amin'ny masoivoho akaiky indrindra an'i Ukraine sy ny mpianatra mahazo visa ho.
tsy misy fanadinana, TOEFL, IELTS takiana Raha manao fampiharana alalan'ny Okrainiana fieken-keloka Center.
Faculty ny General Medicine
Faculty ny Dentistry
Faculty ny Pharmacy
, nahazo diplaoma teny fiofanana
Ny tantaran'ny Lviv University Medical miverina ho 1661, rehefa eo 20 Janoary ny JesuitCollegium tany Lviv ny tombontsoa poloney Mpanjaka Jean II Casimir nahazo ny toerana misy akademia. Izany Nizara efatra departemanta ary nahazo ny anaram-boninahitra ny oniversite. Na izany aza, mandra-pahatongan'ny fiatoana-niakatra ny anjerimanontolo ao 1773, manontolo tsofina ara-pitsaboana tsy nametraka departemanta.
On 16 Novambra 1784, araka ny tombontsoa ny Aotrisy mpanjaka Joseph II, nanao sonia tamin'ny 21 Oktobra 1784, Lviv University dia velona indray tamin'ny efatra fahaizanareo: teolojia, filozofia, ny lalàna sy ny fanafody. Nanomboka teo dia Danylo Halytsky Lviv National University Medical manisa ny taona nanomboka.
Ianao ve mila hadihadio Lviv National University Medical ? Any fanontaniana, fanehoan-kevitra na hevitra
Lviv National University Medical amin'ny Map
Photos: Lviv National University Medical ofisialy Facebook
Lviv National University Medical Hevitra
Miaraha mba hifanakalo hevitra momba ny Lviv National University Medical.
Other anjerimanontolo in Ukraine
Lviv Politeknika National University Lviv
Aviation National University Kyiv